Ikhaya / Ukuhlamba igumbi lokuhlambela / Ukucofa igumbi lokuhlambela kwigumbi lokuhlambela elifanayo / WOWOW I-Chrome ye-Arc ephezulu yeGumbi lokuhlambela
Ngemigca yayo ebanzi kwaye ibandakanywa nokudibanisa umjelo wokuphelisa umanzi, lo mngxunya wokuqubha umngxunya wokucoca umgquba ulongezo olukhulu kulo naliphi na indawo.
Ungaze uphelelwe lixesha: isilivere yesitya sokuhlambela esincinci 2321501C kwisipili-esifana ne-chrome, uyilo lwento engento enkulu kakhulu, kwaye thina sinelungelo lokuphinda senze i-patent-curve forming eyahlukileyo, yenza igumbi lakho lokuhlambela liqaqambe ngakumbi.
Imiyalelo yokufaka ye-2321501C
Isitya sokuhlambela isitampu sokuhlambela isitya esinye 2321501C
Ngaba ujonge isitayile sokuhlambela isitayile esinye isiphatho esenziwe ngobhedu? Sukuqhubeka nokujonga! I-Wowow yenze i-faucet eyenzelwe ngokukodwa igumbi lokuhlambela elinye, eliya kunika indlela entle yokuhombisa kulo naliphi na igumbi lokuhlambela. Abaqulunqi beWOWOW bahlala bekhangela iindlela ezintsha zokunikezela ukubamba okukhethekileyo kunye neefenitshala zayo zokuhlamba. Esi sixhobo sokuphatha igumbi lokuhlambela linye sibonisa uyilo olwahlukileyo lomkhombe. Awuyi kubona le uyilo kwenye indawo kwaye ngokuqinisekileyo uya kuthenga isitofu sokuhlambela esilolunye uhlobo. Olu loyilo lune-patent-curved design oluyi-kathathu lutshintsha nayiphi na indlu yokuhlambela eqhelekileyo kwindawo yokuntywila. Ngaphandle kwamathandabuzo!
Xa uyila ngokutsha okanye uyila igumbi lakho lokuhlambela elitsha, unokufuna ukunika ingqalelo ekhethekileyo kwigumbi lokuhlambela lakho. Ngokwesiqhelo iifayile zegumbi lokuhlambela zikhethwe kuphela ekupheleni kweprojekthi xa umda wohlahlo-lwabiwo mali sele ufikelele (okanye udlule ngaphezulu). Kule meko, kuya kufuneka unqande ukuba uyilo lwakho lokuhlambela lubekwe emngciphekweni ngenxa yokhetho olubi ngokubhekisele kwifenitshala yakho yokugezela. I-Wowow ihlala iphinda-phinda ukuba imigangatho yokuhlambela ekumgangatho ophezulu inokuza ngexabiso elinokufikeleleka. Kwaye kuseyilo olukhulu olongezayo ubuhle, ubuchwephesha, kunye / okanye ukuchukumisa okwangoku kuyilo lwakho lokuhlamba. Ku-WOWOW siqinisekile ukuba sinikezela ngexabiso elifanelekileyo lemali onokufumana.
Isitya sokuhlambela isitokhwe esinye ngexabiso elifanelekileyo lemali
Umgangatho wesiphatho sokuhlambela isiphatho esinye se-WOWOW asiphikiswa. Izixhobo zayo ezomeleleyo zensimbi zibonelela ngokuqina okuphezulu kokusebenza okuphezulu. Uya kuyiphawula le nto xa uphethe igumbi lokuhlambela leWOWOW ngesandla esinye ezandleni. Le yenye iligi xa ithelekiswa neefestile zokuhlambela ezisezantsi onokuthi uzifumane emarikeni. I-Wowow kwelinye icala ayizinzanga kwezoqoqosho konke konke, ibeka emngciphekweni wokonakalisa umgangatho weefesitile zayo kwigumbi lokuhlambela. Kwaye okwangoku, igumbi lokuhlambela igumbi lokuhlambela laseWOWOW lifikeleleke kakhulu. Ke, sinokuthi, awuyi kufumana ixabiso elingcono lemali. Ngenxa yoko, sinikezela ngesiqinisekiso sokubuyiswa kwemali kwiintsuku ezingama-90. Ukuba ungafumana isitofu sokuhlambela esifana nexabiso elisezantsi, okanye isitephu somgangatho ongcono ngexabiso elifanayo, siya kukunika imbuyekezo epheleleyo. Ngaphandle kwemibuzo ebuzwayo
Isiporho esiphezulu se-arc sibonisa aerator yokonga amanzi. Esi sixhobo seNeoperl esisebenza kakuhle sibonelela ngokuhamba kwamanzi agudileyo kwaye ngobumnene bokufumana intuthuzelo efanelekileyo. Awunangxaki yokuchitha amanzi. Isibonelelo esongeziweyo kukuba unokugcina ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-50 zamanzi anolutsha lwento yokuphumla isitupu sokucoca isitya esinye se-WOWOW. Uyakwazi ukuyisusa ngokulula le aerator, usebenzisa isixhobo (esifakiweyo). Ngale ndlela unokuhlambulula i-aerator rhoqo, ususe iintsalela ezinzima, ukukunika amava angcono omsebenzisi.
Isiphatho esinye sokuvavanywa okuphezulu
Izixhobo zesiphatho esinye sokucoca isitya sokuvavanywa ngokukodwa ziye zavavanywa amatyeli aliqela ukukunika eyona ntsebenzo ilungileyo. I-vial ceramic umzekelo ihlolwe ngaphezulu kwama-500,000 amaxesha. Kwaye okwangoku, emva kwazo zonke ezi mvavanyo, i-valve yaqhubeka isebenza kakuhle, ngaphandle kokudonsa, kwaye ayinamvula. Umzi ophakathi unokusebenzisa isitofu sokuhlamba ngaphantsi kwamaxesha ayi-10,000 ngonyaka. Oku kuthetha ukuba ungasebenzisa isuphu enye yokuhlambela ngesibane esinye iminyaka emininzi, ngaphandle kokuphulukana nomsebenzi wayo ochanekileyo.
Ku-WOWOW siqinisekile ngomgangatho kunye nokusebenza kwendawo yethu yokuhlambela isitovu esinye isibambo. Ngenxa yoko, asoyiki ukukunika iminyaka emithathu iwaranti. Ukuba igumbi lokuhlambela ngesiphatho esinye liza kungasebenzi kakuhle kule minyaka mithathu, siya kuyibuyisela ecaleni isitya sakho sokuhlambela ngento entsha. Ngale ndlela, uyaqinisekiswa ngokusebenza okuqhubekayo kwethenipthi yakho yokuntywila. Sithatha uxanduva lwethu ngokungathí sina kwaye siya kuyithatha ngaphandle kwamathandabuzo. Ngaphandle kwento esinayo sineqela elikhulayo ngokukhawuleza kwabathengi abathembekileyo abavela kwihlabathi liphela.
Isixhobo sokuhambisa igumbi lokuhlambela elinomntu omnye
Ukuhamba kwamanzi kunye nobushushu bawo bunokulawulwa ngokulula ngesibambo esinye sale faucet yokuhlambela. Unokulawula ubushushu bamanzi ngesandla esinye, ngelixa isandla sakho sihleli, umzekelo xa uxubha amazinyo. Uya kuqaphela ukungagungqi kokusebenza kwangoko xa usebenzisa le vala ekumgangatho ophezulu. Iya kuba yinto emyoli ngalo lonke ixesha ukusebenzisa esi siphatho.
I-chrome yebhobho yokuhlambela enye yokubamba i-chrome ye-WOWOW iza ne-pop-up yokumisa kunye nokuphuphuma. Esi simiso sivelisayo senza ubunye kunye nesiphatho sakho sokuhlambela esisinye, ukwenza impembelelo enkulu ngakumbi kwikhitshi lakho lasekhitshini. Esi simiso sokuntywila sisebenza ngokulula ngomatshini omnye wokushicilela. Ifuna uxinzelelo oluncinci ukuze isebenze. Ngenxa yoyilo olusebenzayo, inokuhambisa amanzi kude kwindawo yakho yokuhlambela ngokukhawuleza nangokuthe cwaka.
Ukufaka ikhitshi lokuhlambela isitephu esinye isiphatho
Ngenxa yokusebenzisa izixhobo zobhedu eziqinileyo, i-WOWOW inokuqinisekisa ukubonelela kwamanzi-angakhokiyo. Ngale ndlela, unokubonelela usapho lwakho ngamava akhuselekileyo amanzi kwaye akufuneki ukhathazeke ngomgangatho wamanzi. Ubuncinci kungengenxa yesitofu sokuhlambela sakho. Kwaye ngenxa yokuqina kwayo, igumbi lokuhlambela le-WOWOW lokucofa isibambo esinye sinokukuqinisekisa oku kusebenza iminyaka emininzi.
Eyona nto ibalulekileyo yegumbi lokuhlambela isiphatho esinye seWOWOW kukuba ungasifaka ngokwakho ngaphandle kokuqesha iplaki. Esi situpu sokucoca isitya esinye senziwe ngendlela eyahlukileyo kwenye indawo yokuhlambela kwaye sinokufakwa nje kwimizuzu engama-30. Nokuba awuyiyo ingcali. Isiphatho sokuhlambela isitovu sokucoca kwigumbi elinye le-WOWOW liza kunye nezinto ezizeleyo eziqinisekisa inkqubo yokufakelwa: iplate yesitayile esine-intshi (ehambelana zombini kunye ne-4-emngxunyeni wegumbi lokuhlambela lokuhlambela), umsele we-chrome pop-up, I-hucai yamanzi ene-intshi eyi-1-intshi ye-Tucai enomgangatho oqinisekisiweyo, ukufakela iigloves, isixhobo sokususa i-aerator, kunye nokunye. Ngale ndlela, yinto elula ukuba uyenze-ngokwakho-ngokwakho ukufaka igumbi lokuhlambela le-WOWOW yesiphatho esinye.
Inika i-wow-factor kuyo nayiphi na indlu yangasese
ixabiso Best lemali
Ukusebenza kakuhle kokuhamba kwamanzi
Uyilo olwahlukileyo kunye nenhle
Kubandakanya ukuzenzela ngokwakho ukufaka ikiti
I-SKU: 2321501C iindidi: Ukucofa igumbi lokuhlambela kwigumbi lokuhlambela elifanayo, Ukuhlamba igumbi lokuhlambela tags: gqiba upolitwe, isikulufu esixhonyiweyo, Isandla esisodwa